रामकृष्णको स्पष्टीकरण : ‘हामी सधै झै हासिखुसी परिवारमा संगै छौ’, खास कुरा के हो ? | रामकृष्णको स्पष्टीकरण : ‘हामी सधै झै हासिखुसी परिवारमा संगै छौ’, खास कुरा के हो ? – हिपमत
बिराटनगर,पौष १० गते।लोकप्रिय गायक रामकृष्ण ढकाल र उनकी श्रीमती निलम बिच डिभोर्सको खबर बाहिरिएपछी यतिबेला मिडिया ताते संगै विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु रामकृष्ण र निलमले पाईरहेका छन् । धेरैले निलमलाई नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन भने रामकृष्णलाई आफ्नै गीतले यतिबेला साथ दिरहेको छ ।
यता रामकृष्णले डिभोर्सका समाचारहरु भाईरल भैरहदा फेसबुक मा एक पोस्ट सार्बजनिक गर्दै आफुहरुले डिभोर्स नगरेको संकेत गरेका छन् । उनले हिजो डिभोर्सको खबर बाहिरिएको केही बेरमै पनि एक स्टाटसमा लेख्दै “अरूले जे भन्छन् हाम्रो बन्धन कहिल्यै मर्दैन” भन्दै लभ रियाक्ट सहित निलम र आफ्नो फोटो पोस्ट गरेका थिए । हिजोको पोस्टलाई फेरि निरन्तरता दिदै रामकृष्णले फेरि श्रीमान श्रीमतिको फोटो राख्दै एक लामो स्टाटस पोस्ट गरेका छन् । जुन यस्तो छ ।
पछिल्लो समय जसरी मिडियामा म र मेरो जीवन संगिनीको सम्बन्ध विच्छेदलाई लिएर समाचारहरु बनेका छन ती सबै मेरो परिवारको आत्मसम्मान विपरीत छन त्यसैले समाचारलाई विश्वास गरि मेरो परिवार प्रति कुनै पनि नकारात्मक टिप्पणी नगरिदिनु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछु।
उनले आफुलाई सहानुभूति दिनेप्रती धन्यवाद दिएका छन भने श्रीमतीलाई आलोचना गर्ने प्रती चित्त दुखाएका छन् । उनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पोस्ट भएको यो कुरा सरसर्ती हेर्दा यी २ बिचको डिभोर्स नभएको कुरा बुझ्न सकिन्छ । उनले ‘मिडियामा म र मेरो जीवन संगिनीको सम्बन्ध विच्छेदलाई लिएर समाचारहरु बनेका छन ती सबै मेरो परिवारको आत्मसम्मान विपरीत छन’ भन्दै नकारात्मक टिप्पणी नगरिदिन आग्रह गरेका छन् । यता अदालतको दैनिक पेशी सुचीमा रामकृष्ण र निलमको सम्वन्धविच्छेद भएको देखिन्छ । सुचीअनुसार निलम शाहले रामकृष्ण ढकाललाई प्रतिवादी बनाएर ८ पुसमा सम्वन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । उनको मुद्दाको दर्ता नम्बर ०७६-CP-३१८८ छ । अदालतले नै यो कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । तर गायक ढकालले आफ्नो डिभोर्स नभएको बताएका छन् ।